खेतभरि पाकेको धान भित्र्याउने चटारोमा रहेका किसानहरू आकाशतिर हेरिरहेका छन् । धान पाकेर चुट्न ठिक्क भएका बेला असोज–कात्तिकमा अचानक परेको झरीले धेरै किसानको ओठतालु सुकाएको छ । कतिपय स्थानमा धानबाली नै डुबानमा परेको छ । कात्तिकमा बाढी ? धेरै मानिसलाई यसले अचम्ममा पारेको छ ।
विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त समाचारअनुसार देशका धेरै स्थानमा घर भित्र्याउन ठिक्क भएको धानबाली वर्षाले क्षति पुर्‍याएको छ ।यो वर्षको मनसुन नेपालबाट बिदा भइसकेको छ । भीषण वर्षाका कारण धेरै ठुला प्राकृतिक प्रकोपका घटना पनि घटे । मनसुन बिदा भएपछि भने मौसम राम्ररी खुलेको थियो । तर, अचानक झरी पर्‍यो ।
Prevकञ्चनपुरमा एकाविहानै घ’ट्यो यस्तो दु’खत घ’टना, श्रीमान श्रीमती’को मृ’त्यु
Nextभर्खरै आयो दु:खद् खबर ! बाढी र पहिरोले सिङ्गो बस्ती नै लग्यो, मृ;त्यु हुने ३१ जना पुग्यो, ४३ बेप;त्ता( भिडियो )
अन्ततः शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति बन्न असफल, कसले कति मत ल्याए ?